Socdaalka Ina Iley oo si xoogleh u Mideeyey Jaaliyado Iska Soo Horjeeday – Rasaasa News
Waxaa muddooyinkanba si xoog leh oo siyaasadaysan isaga soo horjeeday Jaaliyadaha ay lee yihiin Qurba joogta Somalida Ogadeeniya oo iyagu ah laf dhabarta halganka ay wado Jabhada wadaniga Xoreynta Ogadeeniya [Jwxo].
Khilaafka Jaaliyadaha Qurba joogta ayaa waxaa sal u ahaa, ka dib kolkii Jwxo-shiil lagaga quustay in uu raaco sharciga Jabhada iyo isaga oo ka buuxiyey hal wadeenada Jabhada xigtadiisa. Sidaas ayey Jaaliyadaha qurba joogta ahi uga niyad jabeen Jabhada, waxaana isa sii raaciyey markii uu sanadkan bilowgiisa ay Jwxo-shiil iyo xubno ay isu dhawyiin ay dileen Dr. Maxamed Siraad Dolal.
Arintan dilka ee Dr. dolal, waxay ku keentay ururka ONLF in uu gaadho heerkii ugu hooseeyey ee kalsoonida ay Jalaaliyadah qurba joogtu u hayaan, waxayna bilaabeen Jaaliyaduhu in taageero xoog leh siiyaan Garabkii uu hogaamin jiray Dr. Dolal. Waxayna arintu ku socotaa in uu Jwxo-shiil si khasab ah uu uga dhax baxo halganka Somalida Ogadeeniya.
Qabyaalada iyo isu timo tuurasho ayaa waxay gaadhay heer sare, waxayna dadweynuhu is weydiiyeen markii ugu horeeysay in halganka ay taageerayeen ay daacadnimadu ku yar tahay, iyaga oo sabab ka dhigay, dilka halgamayaalka, dilka jabhadaha kale ka dagaalama dhulka Somalida Ogadeeniya iyo iyada oo ay dadweynaha u soo baxday in ururka Jwxo uu masuul ka yahay is hortaaga mashaariicda danta u ah dadweynaha iyo waliba iyada oo ay Jwxo dishay dadweyne aan wax dambi ah galabsan.
Waxaa Itobiya u soo muuqatay in ay xiligan ka faa,iidaysan karaan dadweynaha qurba joogta ah ee Somalida Ogadeeniya oo aad u kala jaban, waxayna soo dirtay wafti ka socda dhulka Somalida Ogadeeniya si ay ula soo hadlaan ama ay u soo kasbadaan dadweynaha qurba joogta ah. Waxaase sheekada budo caydhiin ku daray, ka dib kolkii waftiga lagu soo daray nin dambiile ah oo ayna maqli karin qurba joogta Somalida Ogadeeniya iyo kuwa gudaha midna.
Waxaan suurto gal marna noqon karin in Cabdi Iley uu si xor ah isu soo hortaago dadweynaha Somalida Ogadeeniya meel ay jogaanba, waana mida ka dhacday dalka Sweden oo kolkii ugu horeysaya ay waftigu doonayeen in ay kula hadlaan dadweynaha. Waxaa suurto gal ah in waftigu ay isku soo biimeeyaan London oo ah meesha labaad ee ay ugu badan yihiin qurba joogta Somalida Ogadeeniya, ka dib kolkii ay ku guul daraysteen Sweden.
London oo ka mid ah meelaha ugu muhiimsan ee aad loogu ixtiraamo xuquuqda dadka ayaa waxaan marna suurto gal noqonaynin in uu dadweynaha reer London soo hor istaago nin dambiile ah oo si xoog leh uga qaybqaatay gumaadkii dadweynaha Somalida Ogadeeniya [the Ogaden genocide 2007/08] ee sanadkii 2007/08.
Waxaana socda dhaqdhaqaaqyo kala socda balse hal ujeedo leh oo ah in si wada jir ah looga hortago dambiileyaalka gumaaday dadweynaha Somalida Ogadeeniya, qaybsanaanta Jaaliyaadka dhexdooda ahna dib loo dhigto.
Sidaasina waxaa ku soo xidhmaya waan waan la is lahaa waxay dhex mari kartaa xukuumada Itobiya iyo qurba joogta Somalida Ogadeeniya oo iyagu ah wadaha halganka Jwxo, ka dib markii waftiga lagu soo daray Cabdi maxamed Cumar Iley, oo isagu si dadban u taageera qaar ka mid ah xubnaha ururka Jwxo.